Imalimboleko yomuntu siqu: iyini, izidingo nomehluko ngesikweletu sakho | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | | Imali
Kunezikhathi lapho ungenayo imali eyanele yento oyithandayo. Noma ukuya kwenye indawo. Noma funda. Yilapho-ke lapho ulinganisa umqondo wemalimboleko yomuntu siqu ekusiza ukuthi ufeze lokho okufunayo. Kodwa ingabe kuwumqondo omuhle ngempela?
Namuhla sifuna ukukhuluma nawe mayelana siyini isikweletu somuntu siqu, izici eziyichazayo, izidingo zokuyicela kanye nezeluleko ezithile ngaphambi kwayo.
1 Yini imali mboleko yomuntu siqu
1.1 Izici zemalimboleko yomuntu siqu
2 Ngingasithola kanjani isikweletu sami
3 Imalimboleko yomuntu siqu noma isikweletu
4 Izinto okufanele uzigcine engqondweni ngaphambi kokucela imali mboleko
4.1 Kala umqondo wemalimboleko yomuntu siqu
4.2 Cabanga ngezinye izinketho
4.3 Hlela kabusha ukubalwa kwezimali kwakho
Yini imali mboleko yomuntu siqu
Imalimboleko yomuntu siqu ibhekisa ku- isivumelwano esisisayine nesikhungo sezezimali (ibhange) esithembisa ngalo ukuthi, esikhundleni sokusinika isamba semali X, sizoyibuyisa inyanga nenyanga ngemali ekhokhwayo, ngaphezu kokunakekela inzalo nezindleko ezitholakalayo.
Ngamanye amagama, kuyindlela ye- uboleke imali ebhange, noma kumuntu, sizibhekise kithi, okungukuthi, imali isetshenziselwa okuthile okuhlobene nomuntu (ukuthenga imoto, amaholide, njll.).
Izici zemalimboleko yomuntu siqu
Phakathi kwezici ezijwayelekile zemalimboleko yomuntu siqu ongayithola, njengokuqala kwazo, iqiniso lokuthi esetshenziselwa izimpahla zabathengi nezinsizakalo ikakhulukazi. Lokho wukuthi, inhloso yakho ukunakekela izindleko zento ofuna ukuyenza, kungaba ukuthenga okuthile, ukuthatha uhambo, ukufunda, njll.
Manje, esinye sezici zayo sihlobene nenani laso, ngoba imali ebolekwayo ayivamisile ukuthi ibe phezulu kakhulu. Eqinisweni, amabhange anomkhawulo wemali "angaboleka" ngemalimboleko yomuntu siqu. Ngaphezu kwalokho, lowo muntu, ngokucela le nsizakalo, kumele phendula ngayo yonke impahla yakho, yamanje neyesikhathi esizayo, kanye nokuzibophezela ukufeza izibopho ezinakho. Lezi yilezi: buyisela imali obolekiswe yona bese ukhokha inzalo namakhomishini ashiwo esivumelwaneni.
Imalimboleko yomuntu siqu futhi yiyo leyo ube nenzalo ephakeme, noma ibize kakhulu kukonke ngoba, njengoba ingekho impahla "eqinisekisa" imali ebolekisiwe, enye indlela amabhange okufanele aqinisekise ngayo ukuthi ukuqoqwa ukucela inani elikhulu lokukhokha. Noma kunjalo, ziyashesha ukucubungula.
Ngingasithola kanjani isikweletu sami
Uma, ngemuva kokufunda konke okungenhla, uthathe isinqumo sokufaka isicelo semalimboleko yomuntu siqu, kufanele wazi ukuthi yiziphi izidingo ezijwayelekile ibhange elizokucela kuzo. Kholwa noma ungakukholwa, uma uhamba nayo yonke imibhalo engaba khona, ungasheshisa inqubo futhi, yize ngokuhamba kwesikhathi kufanele bayifunde futhi kungenzeka ukuthi ungakuphenduli kuze kufike amahora angama-24-48, noma ngisho nezinsuku ezimbalwa kamuva, kuhlala kungcono kunokulinda ukuqoqa idatha.
Yiba seminyakeni esemthethweni (ngeke ukwazi ukucela imali mboleko yomuntu siqu uma ungaphansi kweminyaka engu-18).
Iba ne-DNI noma iPasipoti engaphelelwa yisikhathi futhi ekhombisa ukuthi uhlala eSpain.
Iba ne-akhawunti yasebhange eSpain, kahle ngebhange elifanayo lapho ucela khona ukubolekwa imali.
Khombisa ukuhlangana kwezomnotho. Lokhu kutholakala ngerisidi yasebhange elisebenza ukuqinisekisa ukuthi unemali engenayo ngezikhathi ezithile nokuthi, ngakho-ke, uzokwazi ukuphatha ukubuyisa imali abazokuboleka yona.
Kwezinye izimo, bangacela nesithombe ukufakazela ukuthi ungubani.
Imalimboleko yomuntu siqu noma isikweletu
Imalimboleko yomuntu siqu nesikweletu somuntu siqu imiqondo emibili abaningi abayibheka efanayo, kepha ngokuqinisekile akunjalo.
Uma ufaka isicelo semalimboleko yomuntu siqu, umbolekisi, okungukuthi, lowo onemali futhi akunike yona, kungenzeka angakuniki yonke imali ngasikhathi sinye, kodwa akwenze njengoba uyidinga. Ngakho-ke, inzalo oyikhokhayo akuyona yonke imali oyicelile kukhredithi, kodwa kuphela lokho oyisebenzisayo.
Isibonelo, ake ucabange ukuthi ucela imali mboleko yomuntu siqu engama-euro ayi-6000. Kodwa-ke, kulelo nani, usebenzisa ama-euro angama-3000 kuphela. Inzalo ozoyibuyisa kusuka kuleso sikweletu isuselwa kulawo ma-euro angama-3000, okuyiyona oyisebenzisile, hhayi kuma-6000 owacelile.
Ngakolunye uhlangothi, esimweni semalimboleko yomuntu siqu, inani alinikezwa wena ngasikhathi sinye, kepha, noma ngabe awusebenzisi konke, inzalo oyodingeka uyibuyise ibalwa ngokuphelele.
Izinto okufanele uzigcine engqondweni ngaphambi kokucela imali mboleko
Ngaphambi kokuba siqede, singathanda ukukhuluma nawe mayelana ne- isinqumo sokucela ukubolekwa imali noma cha. Into ejwayelekile ukuthi lo mbono ulinganiswa isikhathi eside ngaphambi kokwenza isinqumo, kepha kwesinye isikhathi kunezindlela zokuthola leyo mali ngaphandle kokufaka inkontileka nebhange, ngaphezu kokukhokhwa kwamakhomishini nezintshisekelo.
Futhi, phakathi kweseluleko esingakunika sona:
Kala umqondo wemalimboleko yomuntu siqu
Ngokuya ngenani, kufanele uhlole ukuthi kukulungele yini ukukwenza noma kungcono ucabange ngezinye izindlela zokuxhasa imali, nokuthi ngabe kungcono kakhulu ongakwenza.
Kwesinye isikhathi isifiso sokuba nokuthile, noma ukwenza okuthile ongeke ukwazi ukukufinyelela kodwa kukuningi ongakufinyelela, miningi, kepha imiphumela ayinakwa kamuva. Ngakho-ke, ngangokunokwenzeka, kufanele uwazise lo mbono.
Ngalesi sizathu, Ngabe uyakwazi ukukhokha inyanga mboleko ngenyanga ngokwemali? Uma ukuthola kunzima ukuziphilisa, ukufaka izindleko ezintsha zenyanga kungakuminzisa kakhulu, futhi ukwehluleka ukuboleka imali kuzodala inzalo ethe xaxa noma kuzodingeka ukhokhele ukubambezeleka, okungabiza kakhulu .
Cabanga ngezinye izinketho
Kwesinye isikhathi ukubuza umngani noma ilunga lomndeni kungasiza ukugwema ukukhokha amakhomishini noma ukucubungula izindleko noma inzalo, kepha lokhu kufanele futhi kucace ukuthi kuzodingeka ukuthi ibuyiswe futhi nemibandela yokuyibuyisa kungavunyelwana ngasese nalowo muntu.
Hlela kabusha ukubalwa kwezimali kwakho
Kwesinye isikhathi nge ukuhlelwa kabusha kwezimali, noma ukuhlanganiswa kabusha kwesikweletu, ungaxazulula inkinga obucabanga ngayo ngokucela imali mboleko yomuntu siqu. Ngaleyo ndlela, izindleko zizohlala zinjalo kepha uzoba nemali ethe xaxa ukuze ukwazi ukubhekana nokufunayo.
Lokhu kusho ukubukeza imali onayo nezindleko onazo futhi, ngemizuzwana, ubheke ukuthi ngabe zidingekile ngempela yini noma empeleni bacabanga ukuthi kukhona okungadingekile ongakususa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Imali » Imalimboleko yomuntu siqu